Health Sarokar | अस्पतालहरू बिरामी मैत्री मात्रै बनाउने कि कुरुवा पनि ?
अस्पतालहरू बिरामी मैत्री मात्रै बनाउने कि कुरुवा पनि ?
काठमाडौं । मानिस बिरामी पर्दा आफू त थला पर्छ नै तर सँग सँगै सो परिवारका अन्य सदस्यहरूमा पनि बिरामीलाई स्याहार सुसार गर्दा गर्दै आफै नै बिरामी पर्न सक्दछन्। अझ परिवारको एक सदस्य अस्पताल नै भर्ना भएको छ भने त कुरुवा बस्नु नै पर्‍यो ।
अनि कुरुवा बस्दा बिरामीलाई औषधि लिन, प्रयोगशालामा नमुना दिन, बिरामीलाई खाने कुरा अनि अन्य उपयोगी समान लिन जानु पर्ने बाध्यता हाम्रो देशका धेरै जसो अस्पतालहरुमा कायमै छ। त्यसैले पनि बिरामीको हेरचाह गर्ने मानिस एक्लै भएमा सारै नै अप्ठ्यारो हुन जान्छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा ‘केयर गिभर बर्डेन’ भनिन्छ।
कति बिरामी कुरुवाहरूको न खाने ठेगान, न त सुत्ने नै । जति जटिल किसिमको बिरामी हो त्यति नै बिरामी कुरुवा गलेका हुन्छन्। यो प्रक्रिया भर्खरै बिरामी परेका मानिसहरूको कुरुवामा धेरै देखिन्छ । अनि समय बित्दै जाँदा बिरामी कुरुवाले अलि अलि गरेर आफूलाई सजिलो बनाउँदै जान्छन्।
हाम्रा अस्पतालहरू पनि बिरामी मैत्री मात्र नभई बिरामी कुरुवा मैत्री बनाउन जरुरी देखिन्छ। अहिले हातका औलामा गन्न मिल्ने केही अस्पतालले दिई रहेका त्यस्ता सेवाहरू मध्यम वर्गीय अस्पतालले पनि दिन थाल्ने हो भने यसबाट धेरैलाई राहत मिल्ने थियो । घरमा नै बिरामी परेर थालिएका व्यक्तिको स्याहार सुसार गर्ने मानिसहरूमा पनि उस्तो समस्या देखिन्छ।
अहिले नेपालमा पनि केही त्यस्ता संस्थाहरू देखिन थालेका छन् जसले बिरामीको स्याहार सुसारमा तपाईँलाई मद्दत गर्दछन्। सायद नेपालमा बढ्दै गरेको युवा पुस्ताको विदेश पलायनले गर्दा पनि त्यस्ता संस्था अहिले धेरै देखिन थालेका हुन् । व्यापारिक हेतुले नै खुलेका भए पनि त्यस्ता संस्था खुल्नाले लामो समय सम्म थालिएका बिरामीको हेरचाह गर्न केही सहज भने भएको देखिन्छ।
तपाईँले विमानमा यात्रा गर्नु भएको छ भने याद गर्नु भएको होला, कसैलाई अक्सिजन मास्क लगाइदिनु अघि अक्सिजन मास्क आफै लगाउन भनिन्छ। ठिक त्यसै गरी नै तपाईँले कसैको हेरचाह गर्नु पर्ने छ भने आफ्नो ख्याल पहिले राख्नु पर्दछ। सोच्नुहोस् त तपाईँ आफै बिरामी पर्नु भयो भने तपाईँको बिरामीको ख्याल कसले राख्ने रु त्यसैले पनि परिवारमा कोही धेरै नै बिरामी परेको छ भने अन्य सदस्यहरूले संयमता अपनाउनु पर्दछ र धेरै तनाव लिनु हुँदैन।